Ahoana ny fanovana ny fandroana amin'ny hevitra tsotra | Bezzia
Susana Garcia | 03/05/2021 20:00 | Decor, Fironana haingo
Ny trano fidiovana dia iray amin'ireo toerana ao an-tranonay izay mila asa sy fanovana bebe kokoa raha te hanavao azy isika. Fa azo atao ny manova ny fisehony amin'ny fikasihana vitsivitsy nefa tsy mila mandalo asa lehibe na fizotra sarotra. Izany no antony ahafahantsika manamarika tetika sy hevitra vitsivitsy hanovana ny fandroana amin'ny fomba mora izay ahatsapantsika fa manana toerana vaovao tanteraka isika.
Tsy zavatra mora ny manavao toerana, fa azontsika atao amin'ny hevitra vitsivitsy izany. Misy ny olona mahavita manova ny habaka an-tranony nefa tsy mila manao asa lehibe, ka manararaotra izay ananany ary manangona vola amin'ilay fanovana. Ho hitantsika ny hevitra vitsivitsy izay hanampy antsika hanova ny trano fidiovana amin'ny fomba mora.
1 Mampiasà loko vita amin'ny taila
2 Sahia amin'ny rindrina
3 Ovay ny hilentika sy ny fitaratra
4 Manampia tany vaovao
5 Manampia zavamaniry
6 Atambatra ny lamba sy ny antsipiriany
Mampiasà loko vita amin'ny taila
Ny iray amin'ireo zavatra atolotra anao hatrany rehefa manavao toerana tsy misy fampiasam-bola firy dia ny mividy loko tsara hanomezana tanana ny zava-drehetra. Tsy ny rindrina ihany no ho vaovao, fa afaka manova ny lokon'ny trano fidiovana isika Ary ataovy izay hiainanao fiainana vaovao Amin'ity tranga ity dia tokony hampiasa loko vita amin'ny tile isika raha io no ananantsika ao amin'ny trano fidiovana. Betsaka ny loko, miaraka amina matte, satin na gloss vita vita, hanomezana endrika vaovao ny trano fidianao. Ity dia iray amin'ireo dingana voalohany tokony hoheverinao. Azonao atao ny manova ny kovetabe fandroana, ny faritra fandroana na ny rindrina rehetra.
Sahia amin'ny rindrina
Ny wallpaper dia singa iray ampiasainay matetika ao amin'ny efitrano fandriana ary koa amin'ny lalantsara na efitrano fandraisam-bahiny. Fa tsy dia fahita loatra ny fahitana azy ao amin'ny faritry ny fandroana. Na izany aza, androany dia a singa avo lenta izay azo ampiasaina amin'ny faritra sasany amin'ny trano fidiovana. Raha manana faritra manda tsy misy taila ianao, dia azonao atao ny manararaotra sy mahasahy mampiasa sary an-drindrina lehibe hanomezana fiotazam-boaloboka sy maro loko ny trano fidianao. Raha fomba fandroana ny trano fidiovana, dia tsara ny hevitra ary azonao atao ny manamboatra trano fandroana ho toerana tena kanto.
Ovay ny hilentika sy ny fitaratra
Azonao atao mampiasa vola amin'ny fitaratra sy fitaratra zava-poana vaovao. Izy io dia ampahany manan-danja tokoa amin'ny efitrano fandroana izay misy fisiana sy laza malaza. Raha tsy afaka manova ireo zavatra hafa izahay, ny fametrahana famaohana vaovao miaraka amin'ny fitehirizana sy ny fitaratra tianao dia mety ho fomba iray hanavaozana ny fandroana indray. Ny fitaratra faran'izay tsotra, boribory na antitra dia tena malaza. Eo amin'ny farany ambany dia azonao atao ny mametraka fitaovana fitehirizana hitehirizana zavatra amin'ny loko mazava tsara. Na ahoana na ahoana, ny fomba fanaka dia miankina amin'ny fomba fandroana.
Manampia tany vaovao
Izany dia efa fanovana tsy azon'ny rehetra atao, fa ny marina dia azo atao ny manova ny gorodona amin'ny asa kely kokoa ankehitriny. Afaka misafidy gorodona ianao apetraka miaraka amin'ny rafitra tsindry ny gorodona vinyl izay maka tahaka ny hazo. Misy azy ireo amin'ny loko tena mahafinaritra ary ataon'izy ireo ho maoderina sy ankehitriny kokoa ny habaka amin'ny alàlan'ny fanangonana azy amin'ny gorodona ananantsika raha toa ka efa lasa tsy fanaony intsony.
ny ny zavamaniry manome loko sy fiainana ny zava-drehetra. Izany no mahatonga azy ireo ho tonga hevitra tsara handravahana toerana. Ny fanampiana zavamaniry sy voninkazo dia manampy bohemian sy fika manokana amin'ny toerana rehetra. Raha ny amin'ny fandroana dia tokony ampidirintsika ireo zavamaniry mahatohitra ny tontolo mando misy, satria raha tsy izany dia tsy ho tafavoaka velona izy ireo. Saingy misy zava-maniry sasany mety amin'ireo toerana ireo.
Atambatra ny lamba sy ny antsipiriany
Zavatra hafa azonao atao miova mora dia lamba sy antsipiriany kely, izay hanisy fiovana lehibe koa. Mitadiava lamba famaohana mifanentana amin'ny antsipiriany sasany ary ho hitanao fa ireo fitambarana ireo dia manome coherence manokana an'ilay habaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Ahoana ny fanovana ny trano fidianao amin'ny fomba mora
Fomba mahazatra miaraka amin'ny pataloha jeans sy t-shirt hitetezana ny tanàna